Imibuzo Evame Ukubuzwa - Wuxi Fuzuan Machinery Technology Co., Ltd.
Ingabe i-FUZUAN yinkampani yokuhweba noma umkhiqizi?
I-FUZUAN ingumkhiqizi, singabahlinzeki bemishini yokucubungula ingilazi yezimoto, futhi siyaklama, sinjiniyela, sikhiqize, sihlanganise, sihlole futhi sihlole imishini emisebenzini ye-FUZUAN, singamukela futhi Ukuhlolwa Kokwamukelwa Kwemboni (FAT) kanye Nokuhlolwa Kokwamukelwa Kwesayithi (SAT ) ngokwezidingo zamakhasimende.
Ingabe uyahlinzeka ngokufaka isevisi kanye ne-SAT?
Yebo, ngaphandle kokufakwa kanye nezibopho ze-SAT, siphinde sinikeze ngoqeqesho futhi siqinisekise konke ukwesekwa, okuhlanganisa nokuxhawula isofthiwe, ukuze kuxhunywe okokusebenza okuhlinzekiwe nokokusebenza okuzenzakalelayo okunamathiselwe okuhlinzekwa nguMnikazi kwabanye abathengisi babo.
Ungaqinisekisa kanjani ikhwalithi yemishini?
Ngaphambi kokuthunyelwa, sizokwenza ukulungisa iphutha nokuhlola endaweni yokusebenzela ye-FUZUAN, kuphela ngemva kwe-PASS, okokusebenza kungalethwa endaweni yamakhasimende ethu.
Okokusebenza ngokwawo, sisebenzisa idizayini enokwethenjelwa kanye nezingxenye zikagesi ezingenisiwe ukuze sandise impilo yesevisi.
Ngaphambi kwe-oda, singakwazi futhi ukuhlela ukuvakashela embonini yethu kanye nefekthri esebenzayo futhi sihlole ukusebenza kwemishini nokusebenza ngaso leso sikhathi.
Ingabe uyasinikeza ulwazi lobuchwepheshe namamanyuwali?
Yebo, yonke imibhalo, imidwebo, imiyalelo, ukusebenza, ukugcinwa kanye namabhukwana okuphepha, amalebula nanoma iyiphi enye idatha izoba ngolimi lwesiNgisi futhi izothunyelwa kuMnikazi ngemva kokunikezwa Kwenkontileka.
Kuthiwani ngemibandela Yokukhokha?
Samukela i-T/T noma i-L/C.
Ngamazinga ajwayelekile, Izinyanga ezi-2-3
Okokusebenza okwenziwe ngokwezifiso, Izinyanga ezi-4-5 ngemuva kokuthola inkokhelo ephansi.